Ciidamada DKMG Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la’aan mudo bilooyin ah – SBC
Ciidamada DKMG Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la’aan mudo bilooyin ah
Posted by editor on Noofember 9, 2011 Comments
Ciidamada dawlada KMG Soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaar la’aan mudo bilooyin ah iyagoo dalbadey in si deg deg ah mushaaraadkooda loo siiyo.
Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawlada KMG oo SBC la hadley ayaa sheegay in ay ugu dambeysay bishii July ee sanadkan wax mushaaraad ah oo ay qaataan, waxaana ay sheegeen in mudo afar bilood ah ay sugayaan msuhaaraadkoodii xili ay sheegeen inay ku jiraan dagaalo & daruufo adag.
Baashi Axmed Kali-Kali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawlada KMG Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in afartii bilood ee ugu dambeysay aanay helin wax mushaaraadka ah, waxaana uu sheegay inaan xitaa loo sheegin xiliga ay qaadan doonaan ama ay filan karaan mushaaraadkooda.
“Waxaynu la dagaalamaynaa Al-Shabaab, waxay uga tagney qoysaskeena & caruurteena sidii aynu u difaaci laheyn dalka, mana aynan helin wixii aan mudneyn, waxaynu u gudbinay cabashadeena madaxweynaha oo dhawaan na soo booqdey, wuxuuna inoo balanqaaday in uu na siin doono mushaaraadkeena” ayuu yiri Baashi.
Laakiin masuul sare oo ka tirsan wasaarada difaaca dawlada KMG oo ka gaabsadey in magaciisa aan baahino sababo uu ku sheegay inaan loo ogeyn in uu saxaafada warsiiyo ayaa sheegay in mushaaradka loo bixin waayey sababo ka dhashay iyadoo dhaqaalihii ay bixin jireen deeqbixiyeyaasha ay hoos u dhacdey.
“Dawladu waxay ku heli kartaa dhaqaale ku filan hadii ay wada qabsato gobolada wadanka oo dhan, waxay markaasi heli kartaa dhaqaale ay ka hesho canshuuraha, laakiin xiligan mushaaraadkoodu waxay ka yimaadaan beesha caalamka & qaramada midoobay, hadii aynan ka helin dhaqaalahaasi iyaga (beesha caalamka & qaramada midoobay) ma jiri karto in la wada bixiyo mushaaraadkooda oo dhan” ayuu yiri sarkaalkaasi.
Horaanti sanadkan ayay aheyd markii dawlada KMG ay sida joogtada ah u bixin jirtey mushaaraadkooda taasi oo wax uun ka tari jirtey hawlaha ciidaamda oo isha ka eeganaya malaayiin doolar oo canshuuro ah oo ka soo xaroonaya dekada Muqdisho, isla markaana dawladu ay dhawaan la wareegtey 3.6 milyan oo doolar oo aheyd lacag madaxfurasho ah oo loo wadey burcad badeed taasi oo lagula qabtey garoonka diyaaradaha Muqdisho ajaaniib iyo diyaarado lagu sidey.
Qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ku macneeyey mushaar bixin la’aanta ciidamada inay dhalin karto in ay wiiqanto awooda ciidamada dawlada ee la dagaalamaya Shabaabka, isla markaana ay geysan karaan falal boob & bililiqo ah oo ay kula kacaan dadweynaha, waxaana haatan la arki karaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil, boob & dhaca hantida dadweynaha & waliba gargaarka beesha caalamka oo lagu eedeynayo ciidamada dawlada KMG Soomaaliya.
Mudadii gaabneyd ee uu Ra’isalwasaaraha dalka ka ahaa Maxamed C/laahi Farmaajo waxay ciidamadu sheegeen in aheyd xiliga kaliya ee ay sida joogtada ah u qaadan jireen mushaaraadkooda taasi oo sababtey in uu sumcad xoogan Ra’isalwasaarahaasi xilka qasabka isaga casilay uu ku dhexyeesho ciidamada dawlada KMG.